ဆိုးတာက ဖဆပလအစိုးရလက်ထက်မှာကြီးမားတဲ့အမှားကတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုငါးတန်းမှစပြီးသင်ကြားစေခဲ့တာပဲ။ဒါကြောင့်ဖဆပလအစိုးရလက်ထက်မှာအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းကဆယ်တန်းအောင်တဲ့သူတွေကအင်္ဂလိပ်စာညံ့ကြတယ်။အဲဒီအစိုးရလက်ထက်မှာပညာရေးစနစ်ကိုစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သတင်းစာတစောင်ရဲ့အယ်ဒီတာကဘာပြောသလဲဆိုတော့ ဖဆပလခေတ်ရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဓါတ်ခွဲခန်းထဲကယုန်လေးတွေလိုပဲတဲ့လေ။
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှာတော့ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်လာတော့တာပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာမြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ကရှိရင်းစွဲထက်ပိုဆိုးရွားလာခဲ့တယ်။ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကသာသနာပြုကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေကိုပြည်သူပိုင်အဖြစ်သိမ်းခဲ့ရုံသာမကတကသအဆောက်အအုံကြီးကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီးမြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ကြီးကိုမြေမြုပ်သဂြိုလ်ပစ်ခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ မဆလခေတ်မှာ ပညာရေးအရာရှိတွေခန့်ထားပြီးပညာရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ပညာရေးစနစ်ကတော့ဖဆပလခေတ်ထက်ပိုဆုတ်ယုတ်လာခဲ့တယ်။
နဝတ နအဖ ခေတ်တွေမှာတော့ရှိသမျှနေရာတွေမှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှိုလိုပေါက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြတယ်ဆိုပါတော့။အဲဒီလုပ်ရပ်တွေကြောင့်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာအရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ဆရာဆရာမတွေလုံလောက်မှုမရှိတော့ပဲအရေအတွက်ကိုသာဦးစားပေးပြီးဆရာဆရာမတွေခန့်အပ်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါကတက္ကသိုလ်ပညာရေးပေါ့။
အဲလိုပဲ အခြေခံပညာရေးလောကမှာလည်းတစ်ခါမှမကြားဖူးတာတွေကြားနေတွေ့နေရတယ်။အထက်က ကျရှုံးသူမရှိစေရလို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် တန်းလုံးကျွတ်အအောင်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေ ကျရှုံးသူများတဲ့အတွက် ပြန်လည်စစ်ဆေးဖြေဆိုခွင့်ပေးရတဲ့အဖြစ်တွေဟာရယ်စရာကြီးများဖြစ်နေသလားလို့ပါ။ကြက်တူရွေး စာအံသလို ဒါသင် ဒါကျက် ဒါဖြေ ဆိုပြီးလူပြိန်းတယောက်မဖြစ်ဖြစ်လာအောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအကွက်ကျကျဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နဝတ နအဖတွေရဲ့ယုတ်မာချက်ကတော့မီးကုန်ယမ်းကုန်ပါပဲ။
ဒီတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်နေပါတယ်။မြန်မာပြည်ကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းများကိုကျွန်မပြောချင်တာကတော့ အခြေခံပညာမူလတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ အခန်းနဲ့မဆံ့အောင်ကျောင်းသားတွေပြည့်ကျပ်နေတာတွေ . စာသင်ခန်းထိုင်ခုံတွေမလုံလောက်မှုတွေ. အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ဆရာဆရာမများနည်းပါးမှုတွေ ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာသဘောလောက်သာသင်ပြီးကျူရှင်ပေးနေမှုတွေ အစိုးရကျောင်းတွေမှာအမျိုးသားကျောင်းဆရာတွေမရှိသလောက်နည်းပါးလာမှုတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။
Posted by Myo Lwin Aung at 4:36 AM